Horumarka Aadanaha iyo Dunida Teknolojiyada ee Dell | Martech Zone
Horumarka Aadanaha iyo Dell Technology World
Haddii aad kaliya fiiro gaar ah siisay tikniyoolajiyadda adigoo u maraya ilaha warbaahinta guud, waxaad u maleyn kartaa in gawaarida iswada ay dilaan dadka, aalado ayaa qaadaya shaqooyinkeena, teknoolojiyaduna waxay nagu hogaamineysaa halaag. Suuqgeyaal ahaan, waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay inaanan dhag u dhigin oo kaliya barnaamijka xiga ee dilaaga ah, waxaan u baahanahay inaan la soconno sida tikniyoolajiyadu u saameyneyso nolosha iyo dhaqanka macaamiisha iyo ganacsiyada.
Xaqiiqooyinka ku saabsan Isbadal digital ah waa iska soo horjeed.
Aynu ku bilowno gawaarida iswada. Bini'aadamku waxay sii wadaan shilalka baabuurta ee dhimashada leh, oo ay ku dhintaan celcelis ahaan 3,287 Mareykan ah maalin kasta. Gawaarida caqliga leh ma dilayaan… waxay badbaadin doonaan nafta. Xaqiiqdii, waxaan ku qiyaasi lahaa inay iyaguba yihiin. Markii aan u socday Dell Tech World ee Las Vegas, waxaan ku qoray qoraal waddada oo aan ku tilmaamay qaar ka mid ah muuqaalada cusub ee Chrysler Pacifica Waan kiraysan lahaa Shaki iigama jiro howlaha ismaamulka ee gaarigaasi waxay yareeyeen halista aan ugujiro shilalka safarkayga oo dhan 5,000-mayl.
Shaqo qaadashada? In kasta oo horumar kasta oo tikniyoolajiyad ah ay meesha ka saarto baahida loo qabo shaqooyinka qaarkood, shaqooyin cusub ayaa halkan yaal. Soddon sano ka hor, cidina ma maleynin (aniga oo aan ku jiro) in aan maamulo wakaalad dijitaal ah oo aan u sameeyo soosaaro shirkad ka bilaabatay iibinta kombuyuutarrada guryaha lagu sameeyo garaash. Waxaan hayaa kumanaan asxaabteyda ah oo si wanaagsan u magdhabaya shaqooyinka aan weligood jirin dhowr iyo toban sano ka hor.
Waxaan ku jiri karaa dadka laga tirada badan yahay markay tahay otomaatiga. Waxaan ahay rajo xumo aaminsan in otomaatigu uusan shaqooyin qaadanayn; waxay sii fogeyneysaa caqabadaha xitaa intaas ka sii badan. Iyada oo qayb ka ah xilli ciyaareedkan ka mid ah Nalalka Podcast, waxaan wareysanay aasaasaha DAQRI, shirkad xaqiiqo ah oo la kordhiyay oo isku darsatay softiweer iyo qalab ku jira nidaam la yiraahdo Workense.
Isku dar shaqaale xirfad leh oo leh barxad AR ah sida DAQRI oo muujin kara qoraallo, tilmaamo, iyo xitaa kugula xiriiri kara khabiir ku sugan waqtiga dhabta ah… iyo in shaqaaluhu awoodi karo inuu sameeyo dayactir ka hortag ah iyo hagaajin ah oo ku saabsan qalabka laga yaabo inaysan xitaa tababar ku qaadin . Marka, taasi waxay ballaarin kartaa fursadahayaga shaqo, ee ma beddeleyso.
Teknoolojiyaddu sidoo kale waxay noqoneysaa mid waxtar leh weligeed. Kaydinta oo kordhay, awoodda xisaabinta, iyo heerarka wareejinta xogta oo si aad ah hoos loogu dhigay astaamaha tamarta ayaa gacan ka geysanaya yareynta tamarta halbeegga shaqada, oo aan kordhin. Waana mid naga caawinaysa inaanu beddelno warshadaha soo-jireenka ah ee aynaan u maleynayn in dib loo soo celin karo. Aerofarms, tusaale ahaan, waxay kordhineysaa waxsoosaarka beeraha 390% iyadoo lagu rarayo gudaha, iyadoo lagu hagaajinayo laydh jaban, oo la awoodi karo oo lagu hagaajinayo dalag kasta iyo yaraynta baahida biyaha 95%. Beerashada gudaha waxay ka dhigi kartaa cunto nafaqo leh mid la awoodi karo oo ay heli karaan qof walba oo meeraha ku nool.
Waxaan sii wadaa inaan uga digo macaamiishayda inaan ku jirno mowjad cusub oo isbeddelka tikniyoolajiyadda ah. Awoodda xisaabinta ee cabirka leh, isku xirnaanta wireless-xawaaraha sare leh, iyo keydinta aan xadidneyn ayaa furaya irridda laga galo sirdoonka macmal, barashada qoto dheer, barashada mashiinka, ka shaqeynta luuqada dabiiciga ah, iyo Internet of Waxyaabaha.
Weli lama iibin? Google ayaa dhawaan soo saartay demo ay leedahay Kaaliyaha Google taasi waa inay bedesho maskaxdaada. Kaaliyaha Google wuxuu kujiraa dhinaca hore - isagoo faraya qalabkaaga IoT inuu ballan kuu sameeyo. Hufnaanta horumarkan ayaa macno ahaan aasmi kara tartamayaasha Google sida Apple iyo Amazon haddii aysan awoodin inay sii wadaan. In kasta oo taasi u muuqan karin wax caqli gal ah, xusuusnow in dadwaynuhu weligood u malayn jirin Nokia iyo Blackberry inay waayi doonaan xukunkooda, sidoo kale.
Casharradu kuma jiraan shirkadaha tiknoolajiyadda oo keliya, waxay cashar u tahay shirkad kasta. Badeecad kasta iyo adeeg kasta oo ka jira meeraha waxaa lagu horumarin karaa ama lagu beddeli karaa teknolojiyada teses. Shirkad kastaa waxay u abuuri kartaa xiriir macaamiisha aan horay u jirin. Nidaamka HVAC ee gurigayga ayaa lagu beddelayaa usbuuca soo socda nidaam cusub oo ka waxtar badan.
Intii aan sugayay guri qabow iyo biil tamar oo hooseeya, horumarka ugu weyn ayaa ah in shirkaddu ay rakibayso nidaam heer-kulmeed iyo kormeer barnaamij ah. Nidaamku wuxuu ku yimaadaa 10-sano oo dammaanad ah… iyo nidaamka la socoshada ayaa runti u digaya shirkaddayda HVAC haddii ay jiraan arrimo. Shirkaddan adeegani waxay hadda xiriir toos ah 10-sano ah oo ay la leedahay macmiilkeeda ka dhex mareysaa barmaamijkan - iyada oo aan loo baahnayn barxad dhinac saddexaad ah oo aniga la iiga baaro. Tani waa nidaamka ugu wanaagsan ee haynta macaamiisha, abid. Iyo, macaamil ahaan, waxaan soo dhaweynayaa isku xirnaanta!
Waa lagama maarmaan in shirkaddaadu bilawdo inay ka fikirto sida aad u qaadan karto oo aad u maamuli karto warshadahaaga ka hor inta aysan shirkaddaadu ku dhicin.